एक था ‘Giant Killers’ ! | INSANE VIBES
एक था ‘Giant Killers’ !	15 Aug 2012 Leaveacomment
Tags: CAN, Nepali Cricket, U19
सन् २००२-०३ तिर होला! मलाई क्रिकेटको ‘क’ पनि थाहा थिएन। त्यतिबेला मैले सुनें-नेपालको लक्ष्य २००७को विश्वकप भनेर। त्यसपछि निरन्तर नेपाली क्रिकेट ‘फलो’ गरिरा’को छु। क्रिकेटको ज्ञाता त म अहिलेपनि छैन तर धेरथोर क्रिकेट बुझ्छु। साँच्चै भन्ने हो भने म क्रिकेटको भन्दा बढी ‘नेपाली क्रिकेट’ को फ्यान हुँ। नेपालको म्याचका अपडेट कति सुनियो कति। नेपालको खेल हेर्न टियु कति कुदियो लेखाजोखा छैन। तर आज एक दशकपछि नेपाली क्रिकेटको अवस्था खस्किँदो छ! हाम्रो बिश्वकपको लक्ष्य ०११, ०१५ हुँदै अब ०१९ को बिश्वकप पुगिसक्यो। (भलै टेस्ट नखेल्ने देशहरुलाई समावेश गर्ने या नगर्ने भन्नेमा चर्कै बहस छ । ) आखिर किन हुँदैछ यस्तो? किन जाँदै छ नेपाली क्रिकेट उँधो गतितिर?
No ‘Giant Killers’ anymore!
सन् २०००को यू१९ बिश्वकपमा नेपाल केन्यालाई हराउँदै सुपरलिगमा पुग्न सफल भएको थियो। समयले पनि साथ दिएको थियो त्यतिबेला। २००२को बिश्वकपमा नेपालले पाकिस्तान र बंगलादेशलाई हरायो।२००४मा साउथ अफ्रीका बन्यो नेपालको सिकार। २००६को बिश्वकपमा त झन नेपालले सनसनी मच्चाउँदै प्लेट च्याम्पियन बन्यो । साउथ अफ्रीका र न्युजिल्याण्ड जस्ता टिमहरु नेपालसंग पराजित भए। नेपालले ‘Giant Killers’ भन्ने उपाधिनै पायो। त्यसपछि हामीले लक्ष्यहरु कोर्यों, सपना देख्यौं विश्वकप सम्मको। त्यी सपनाहरु अस्वाभाविक थिएनन्- नेपालको प्रदर्शन, अझ बिशेषगरी उमेर समुहको प्रदर्शनलाई आधार मान्ने हो भने। उमेर समुहमा अझपनि नेपाल राम्रै मानिन्छ शायद। तर यहाँ पनि सोच्नु पर्ने बेला आइसकेको छ। अफगानिस्तान र यूएई जस्ता टिमले धेरै फड्को मारिसकेका छन्। कतार र मलेशिया पनि नेपालको लागि ठूलै चुनौती बनिसके। सिनिएर टिमको त कुरै छोडौं । ACC ट्रफीमा पनि फिक्का भैसक्यो। म त वाक्क भैसकें। कहिलेकाहीं सोच्छु- हाम्रै जीवनकालमा खेल्ला त नेपालले विश्वकप?
अहिले डीभीजन-४ मा खेलिरहेको छ नेपाल। त्यहाँबाट डीभीजन-१ सम्मको यात्रा अनि बिश्वकप-निकै टाढै छ। उमेर समुहमा पनि फितलो देखिन थालिसकेको छ नेपाल अचेल। हिजोअस्तिको यू-१९ मा नेपालले अस्ट्रेलिया संग बेहोरेको लज्जास्पद हार र आएरल्याण्ड सँग बेहोरेको पराजयले नेपालको स्तर मापन गर्न सकिन्छ। आज पनि इंग्लैंडसँग नराम्ररी हारेको समाचार आएको छ। अर्थात्- संकेतहरू सुखद छैनन्। लामो समय कोच रोय डाएसले नेपाली टिम सम्हाले। उनको पालामा नेपाली क्रिकेटले राम्रै सफलता पायो तर ब्याटिंगमा रहेको कमजोरी हटाउन सकेनन् उनले। ‘T20 फर्म्याट नेपाललाई उपयुक्त छैन’ भन्ने गर्थे शायद उनी । अहिलेका कोच दासानायके त्यो कुरा मान्दैनन् शायद तर पनि उनको कोचिंगले नेपाली क्रिकेटमा तात्विक फरक ल्याउन सकेको छैन।
त्यसमाथि CANको लिला अपरम्पार लाग्छ मलाई। क्रिकेटमा नि कत्ति राजनीति गर्न सकेको हो? केही समयअघी क्यानको चुनावको खुब ड्रामाबाजी थियो। नेपाली क्रिकेटको स्तर कसरी सुधार्ने भन्दानि कसले के पद पड्काउने भन्ने इस्सु ठुलो। देशभरिका त्यी सबै पदाधिकारीहरुलाई तलब बाँड्न पनि थुप्रै धनराशी खर्च हुँदो हो। कत्ति क्रिकेटरको त ब्याट किन्ने औकात पनि छैन भन्ने सुनिन्छ। नेपाली फुटबलरले त जे भएनि धेरथोर पैसा कमाउँछन्, तर क्रिकेटहरुलाई त्यस्तो अवसर छैन। त्यसमा ध्यान दिएको खोई? दुइचार वटा गतिलो स्टेडियम को आवश्यकता छ। एउटा गतिलो कोच राखे पनि त हुन्थ्यो। संधै झारा टार्ने काम मात्र गर्छ क्यानले। प्रदर्शन हेरेर कोच बदल्ने या राख्ने गर्नु पर्ने होइन र? नेपाली क्रिकेटको बिकाशमा इमान्दारीसाथ लाग्ने हो भने पैसाको कमी कहिल्यै हुने छैन शायद। साना-तिना, झिना-मसिना म्याच हेर्न टियु पुग्ने दर्शकको हुल नै बताउँछ-यहाँ चाहने हो भने जे पनि गर्न सकिन्छ। यो १० बर्षमा म नेपाली क्रिकेटदेखि धेरै निराश भैसकेको छु। हामी संधै ठुल्ठुला आशा पालेर बस्छौं अनि अन्त्यमा नराम्ररी पछारिन्छौ। जगनै बलियो छैन भने धेरै आस गर्नु बेकार छ। क्यान तथा सम्बन्धित निकायले बेलामै ध्यान नदिने हो भने भोलि यही सम्झेर चित्त बुझाउनु पर्ने हुन सक्छ- एक था ‘Giant Killers’!
Previous Happy New Year 2069! Next अन्धकारमै बित्ने भो जीवन!